Sex – စာမကျြနှာ3– Healthy Life Journal
မေး။ ။ ဆရာခင်ဗျာ . . မသိလို့ မေးချင်ပါတယ်။ အတူနေပြီးရင် မိန်းမဆီးအောင့်တတ်လို့ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ Chit Thu Lay(FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တာ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆီးလမ်းကြောင်းတိုတဲ့အတွက်...
၊ လရိပ်မေ ၊ ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး ကက်သရင်းဇီတာဂျုံးဟာ အသက် ၆၀ကျော်တဲ့ မိုက်ကယ်ဒေါက်ကလပ်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ အစားအသောက်တွေကို ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ ကညွတ်၊ ထောပတ်သီး၊ တိရစ္ဆာန်အသည်းစတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အားကောင်းစေတဲ့ အစားအစာတွေကို ပါဝင်အောင် ထည့်သွင်းလေ့ရှိပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့...
အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတို့အတွက် အိမ်ထောင်မှုသုခ ယုတ်လျော့စေသော အရာများ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အိမ်ထောင်သည်တွေရဲ့အိမ်ထောင်မှုသုခကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေထဲမှာ အောက်ပါအချက်တွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ စိတ်ကျကုသဆေးရေရှည်မှီဝဲရခြင်း စိတ်ကျရောဂါကုသရာမှာသုံးတဲ့ ဆေးဝါးတွေက စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းမွန်စေပေမယ့် လိင်ဆန္ဒကိုတော့ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ စိတ်ကျကုသဆေးတွေဟာ တက်စတိုစတီ ရုန်းဟော်မုန်းအဆင့်ကို လျော့ကျစေပြီး သွေးစီးဆင်းမှုကို...
၊ ကိုထက် ၊ လိင်ကိစ္စကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေက အာဟာရချို့တဲ့တာ၊ ဟော်မုန်းမမျှတတာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀မ်းနည်းကြေကွဲတာနဲ့ ရောဂါဝေဒနာ ခံစားရတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဟာရချို့တဲ့မှု အာဟာရချို့တဲ့တာဟာ အမျိုးသားတွေမှာ သုက်လွှတ်နိုင်စွမ်း မရှိတာနဲ့ အဓိက ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အဓိက အနေနဲ့...
မေး. ကျွန်မအိမ်ထောင်ကျတာ မကြာသေးပါဘူး။ ကျွန်မအမျိုးသားကလွဲရင် ကျွန်မရည်းစားတောင် မထားဖူးပါဘူးဆရာ။ ကျွန်မအရမ်းဝလို့ အတူတူနေဖို့ဆိုတာ ပိုတောင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မအမျိုးသားနဲ့ အတူတူစနေတော့ ကျွန်မဆီက သွေးလည်းမထွက်သလို ချောင်နေလို့ ကျွန်မအမျိုးသားက ပြဿနာရှာနေလို့ပါဆရာ။ ဘယ်လိုကြောင့်လဲ။ ကျွန်မဘာလုပ်ရမလဲရှင့်။ မရိုသေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ...
အတူနေတာ ကွန်ဒုံးသုံးပေမယ့် ပေါက်သွားလို့ပါ . .
မေး။ ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်လောက်က အတူနေဖြစ်တယ်။ ကွန်ဒုံးလည်း သုံးပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွန်ဒုံးက ဘောလုံးပေါက်သလို ဖုတ်ဆိုပေါက်သွားတယ်။ အသံကြားတာနဲ့ချက်ချင်းထုတ် လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အသစ်ပြန်လဲလိုက်တယ်။ အဲ့မိန်းကလေးက ရောဂါပိုးရှိရင် ကူးနိုင်ခြေရှိလားဆို တာကိုပြောပြပေးပါ။ ဆေးလည်း စစ်ချင်တယ်။...
အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတို့အတွက် လိင်စိတ် လျော့နည်းစေသည့် အကြောင်းများ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အိမ်ထောင်သည်တွေရဲ့ အိမ်ထောင်မှုသုခကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေထဲမှာ အောက်ပါ အချက်တွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ – စိတ်ကျကုသဆေး စိတ်ကျရောဂါ ကုသရာမှာသုံးတဲ့ ဆေးဝါးတွေ က စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းမွန်စေပေမယ့် လိင်ဆန္ဒကိုတော့ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့...
အမျိုးသားတွေ ကာမအားတိုးဆေး ငါးလုံးလောက်သောက်ရင်ဘာဖြစ်တတ်သလဲ . . .
မေး ။ ။ မေးစရာလေးရှိလို့ပါ။ အမျိုးသားတွေသောက်တဲ့ ကာမအားတိုးဆေး အင်္ဂလိပ်ဆေး အနီရောင်ဆေးလေးတွေကို တစ်ခါတည်းငါးလုံးလောက်သောက်ရင် ဘာဖြစ်တတ်လဲသိချင်လို့ပါ။ ကိုလတ် (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ ။ အမျိုးသားတွေပန်းသေပန်းညှိုးတဲ့အခါ သောက်ရတဲ့ဆေးကို ဆိုလိုတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေဟာ ကာမအားတိုးဆေးမဟုတ်သလို...
လိင်စိတ်အားပေး အစာနဲ့ ဆေးများ (Aphrodisiac)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ သူများ ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာ ဖို-မ ဆက်ဆံတာမယ် မေတ္တာတွေ၊ ချစ်တာတွေ အသာထား၊ “တွေ့တဲ့ဟာနဲ့ ကြုံရာကျပန်း၊ တစ်ညတာ စခန်းသွား” နေကြလို့ အချစ်ဆိုတာလေး ရှာတော့ ၃ ရာစုမှာ သွားတွေ့ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်ကို သတ်မှတ်တဲ့...